‍प्रधानमन्त्रीले पुनः शपथ खानुपर्ने भनेर रिट हाल्ने वकिललाई 'धम्कीपूर्ण फोन' - Sidha News
‍प्रधानमन्त्रीले पुनः शपथ खानुपर्ने भनेर रिट हाल्ने वकिललाई ‘धम्कीपूर्ण फोन’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गर्दा संविधान मिचिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने अधिवक्तालाई धम्की आएको छ । पुनः शपथ ग्रहणको माग राख्दै सोमबार रिट दर्ता गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई बुधबार धम्कीपूर्ण फोन आएको हो ।
आफूलाई धम्कीपूर्ण फोन आएको जानकारी डा‍ ज्ञवालीले नेपाल बार एसोसिएसनलाई गराएका छन् । धम्कीको विषयमा कुरा गर्दै बार ध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले यो विषयमा सल्लाह गरेर निर्णयमा पुग्‍ने बताए । बारले यो धम्कीबारे जानकारी पाएको र आवश्यक छलफल गरिरहेकोसमेत अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रष्ट पारे ।
‘एक जना कोही मित्रले कल गर्नुभयो, चन्द्रकान्त ज्ञावालीको पृष्ठभूमि के हो ? कहिले अधिवक्ता भएको हो ? कहिले वरिष्ठ पाएको हो ? विश्वविद्यालयमा जागिर भएको मान्छेले सरकारकै विरुद्धमा जान हुने हो कि नहुने हो ? भनेर धम्याएको जानकारी मैले पाएँ’, उनले भने, ‘कहाँबाट यो फोन आएको हो थाहा भएन, यसो हुन नपर्ने हो, संविधानले वकालत गर्ने अधिकार दिएको छ ।’